Venzọ a gosipụtara na obere uru azụmahịa gị na Social Media Marketing | Martech Zone
Venzọ a gosipụtara na obere uru azụmahịa gị na Social Media Marketing
Ọ ga-eju gị anya na, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ na ihe akaebe niile, a ka nwere ndị naysayers nọ na obere ụwa azụmaahịa kwenyere na mgbasa ozi ọha na eze bụ igbu oge. Ekwela ka m mehie… ọ nwere ike ịbụ igbu oge. Ọ bụrụ n ’iji oge gị na-ekiri na na-ezipụ vidio pusi, ikekwe ị gaghị enwe nnukwu azụmahịa.
Ekwenyesiri m ike na mgbe azụmahịa mbụ nwetara telefon, ndị isi nwere nchegbu na ndị ọrụ ga-eso ndị enyi ha na-akparịta ụka ụbọchị niile. Ma ugbu a ọ dịghị onye na-ajụ mkpa ọ dị inwe ike ijikọ azụmahịa na ekwentị - ma ọpụpụ ma ọ bụ inbound. Mgbasa mgbasa ozi adịghị iche… ọ bụ usoro nkwukọrịta ma dabere na atụmatụ ụlọ ọrụ gị na-eji ya.
Ọ bụrụ na ị sonye n’òtù dị iche iche, kesaa isiokwu ndị bara uru, jikọọ ma soro ndị na - eme ihe ike, nyere ndị nwere nsogbu aka, kwalite ọdịnaya dị ukwuu nke gị, ịgwọta na ịkekọrịta oke ọdịnaya site na ndị ọzọ, ị nwere ike ịbawanye netwọkụ mara mma nke nwere ike ịnye ọtụtụ afọ nke ego.
Nsogbu a agbanyeghi na inwe onu ogugu mmadu na ibe ya kama otua ka ndi oru a si etinye ndi mmadu aka. Site na obere azụmaahịa azụmaahịa, ịre ahịa mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị inweta ihe ndị masịrị, ndị fan, repins na retweets, kama ị ga-enweta uru ndị kachasị elu, yana ndị ọzọ, nke ahụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na azụmaahịa a. Jomer Gregorio, CJG Digital Ahịa.
Wzọ 8 nke Social Media Marketing na-erite uru na obere azụmaahịa
Bawanye okporo ụzọ weebụsaịtị.
Na-eduga na obere ụgwọ.
Na-akwado ahịa ọdịnaya.
Eme brand ika mmata.
Kwadoro ika gị.
Na-enye gị nnukwu nghọta nke ndị na-ege ntị.
Mma ika iguzosi ike n'ihe.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na CJG jiri okwu ahụ mee ihe brand na infographic ahụ. Ezie na e nwere ọtụtụ nke data iji kwado dum uru nke na-elekọta mmadụ media na a ika, M ga-arụ ụka na mmetụta na gị ndị mmadụ ka ukwuu. Mgbasa mgbasa ozi abụghị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-agwa gị site na obere azụmahịa, ọ bụ ndị obere azụmahịa!
Ndị mmadụ na-enye ohere maka ntụkwasị obi na itinye aka na akara gị adịghị. Ndị mmadụ nwere ike ịmata gị, tụkwasị gị obi, jụọ gị ajụjụ, ma mechaa zụta gị. Branddị gị na-erite uru na nke a niile, n'ezie… mana n'ihi ndị gị. Na ọ bụ isi, ọ bụ -elekọta mmadụ mgbasa ozi, ọ bụghị naanị otu ụzọ.
Tags: Ahịa Digital CJGokpokoroinfographicobere azụmahịaelekọta mmadụ na-erite uruelekọta mmadụ media infographic